Chọọchị Ndị Kraịst Zion - WRSP
ZION CHRISTIAN CHURCH TIMELINE
1885: Engenas (Ignatius) Lekganyane, bụ onye guzobere Zion Christian Church, mụrụ ya.
1904: Nnukwu baptism na Wakkerstroom nke ndị ozi ala ọzọ sitere na Christian Catholic Apostolic Church na Zion, Illinois, mere. E mechara hiwe ụka ụka Zionist.
1908: N’okpuru nduzi nke ndị ozi ala ọzọ abụọ America, Apostolic Faith Mission (AFM) hiwere. Ọtụtụ n'ime ndị Zionist Wakkerstroom sonyeere, mana ha siri ọnwụ idebe aha ha.
1910: Engenas Lekganyane natara oku ya na nrọ.
1912: Engenas Lekganyane ama ana baptism ke Zionist alaka nke AFM.
1916: Nzukọ Zionist n'ime AFM nke Lekganyane si na AFM pụọ ma guzobe Zion Apostolic Church (ZAC).
1916: Engenas Lekganyane natara nzere nkwusa ya n'ime ZAC.
1919: Nzukọ ojii ọzọ dị n'ime AFM kwụsịrị ma ghọọ Zion Apostolic Faith Mission (ZAFM), n'okpuru nduzi nke Edward (Lion) Motaung.
1920: Engenas Lekganyane sonyeere ZAFM na ụmụazụ ya si mpaghara Limpopo.
1924-1925: Engenas Lekganyane guzobere Zion Christian Church mgbe esemokwu na ndu ZAFM.
1930: Nsogbu nke isi obodo mere Engenas Lekganyane ịchọta ebe obibi.
1942: Site n'enyemaka nke ndị otu ụka, Engenas Lekganyane zụrụ ala na Boyne, nke ghọrọ Zion City Moria, isi ụlọ ụka ahụ na saịtị nke njem ụka kwa afọ nke ndị otu ZCC.
1948 (June 1): Engenas Lekganyane nwụrụ.
1949: Mgbe a gbasasịrị nduzi nke ụka, Engenas nwa Edward Lekganyane ghọrọ onye ndu ọhụrụ. Nwa nwoke nke Engenas, Joseph, guzobere St. Engenas Zion Christian Church.
1961: Frederick Modise hapụrụ ZCC ma hiwe Nzukọ Nsọ Nsọ nke Pentikọstal.
1967 (October 21) Edward Lekganyane nwụrụ. A họpụtara nwa ya nwoke bụ Barnabas Ramarumo Lekganyane onye ndú n'okpuru nlekọta.
1975: Barnabas Ramarumo Lekganyane ghọrọ onye ndu zuru oke nke ZCC.
1992 (Eprel 20): Onye isi ala FW de Klerk, Nelson Mandela na Mangosuthu Buthelezi nọ na nnọkọ Ista na Moria.
Na South Africa, Zionism Ndị Kraịst na Pentikọstism nwere otu mmalite ahụ. Nkeji iri na ise nke narị afọ nke iri abụọ bụ oge e hiwere ọtụtụ ụka. Ụka ndị a nwere ụmụ amaala, ndị isi ojii ma bụrụ ndị a na-eguzobe onwe ha site na chọọchị ụka dị iche iche, ọ bụ ezie na echiche okpukpe si esenidụt nwere ike iweta mkpali maka nhazi chọọchị. The Zion Christian Church (ZCC) bụ South Africa kasị ukwuu Afrika-malitere ma ọ bụ ụmụ amaala chọọchị.
Engenas (Ignatius) Banabas Lekganyane, a mụrụ na 1885 (ma ọ bụ dị ka Morton (nd a) mgbe 1890 gasịrị, na nkwụsị nke Mianbolo, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Polokwane ugbu a . Nke a bụ oge mgba, n'etiti agha Anglo-Boer, Mamabolo hapụrụ ebe ahụ, gbasasịa na mpaghara Limpopo ugbu a. Mgbe 1904 gasịrị, Mamabolo laghachiri ma zụta ugbo na mpaghara ebe ha si bịa. N'oge a, Lekganyane gara ụlọ akwụkwọ ndị Anglican (Morton a a). Ọtụtụ ndị ezinụlọ ya ghọrọ ndị Anglịkan. Na 1909, mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, o sonyeere chọọchị Presbyterian ma malite ịrụ ọrụ na mgbidi, ebe ọ na-azụkwa ọzụzụ ịbụ onye nkwusa ozioma. Na 1910, Lekganyane nụrụ olu na-agwa ya okwu na nrọ, na-agwa ya ka ọ gaa hụ chọọchị nke na-agwọ ma na-eme baptizim n'ime osimiri (Moripe 1996: 18). Maka ZCC, ihe omume a bụ oge ntọala nke ụka (Rafapa 2013).
N'oge Engenas dị na nwata, ihe omume okpukpe na-eme na United States nke ga-enwe mmetụta dị ukwuu maka mmepe nke Iso Ụzọ Kraịst Zionist na South Africa. Na 1896, John Alexander Dowie malitere Chọọchị Ndị Katọlik (Apostolic) (CCCZ) na Zion City, Illinois. Chọọchị kwenyere n'okwukwe na-agwọ ọrịa, baptism site na nmikpu atọ na ọbịbịa nke ọbịbịa nke nso, na Zion City bụ ezigbo ndị obodo ebe ndị ụka nọkọrọ ọnụ dịka iwu nke ha si dị. Ụkpụrụ agbụrụ ọdịda Dowia, ozizi ya kụkwara ọtụtụ ndị ozi ala ọzọ ịga leta Afrika (Kruger na Saayman 2014: 29). Magazin nke ụka, Akwụkwọ nke ịgwọ ọrịa, nwere ndebanye aha zuru ụwa ọnụ, ma bịaruo South Africa. Ọ bụ ụka dị na Wakkerstroom, bụ Pieter Le Roux, bụ onye pastọ ọcha nke dị na South African obodo, nwere mmetụta dị ukwuu, ma ghọọ onye so na 1903, mgbe ọ hapụrụ Dutch Reformed Church. O weere ọtụtụ n'ime ndị òtù ọgbakọ ya, ma kpọọ ndị ozi ala ọzọ si CCCZ ka ha gaa kwusaa ozi ọma na South Africa. N'oge ihe omume a, na 1904, ihe karịrị 140 karịsịa ndị Kristian ojii (gụnyere Le Roux na ezinụlọ ya) mere baptizim na CCCZ. Ihe omume a bụ mmalite nke inwe mmasị na-adigide na Zayọn na ndụ ndị okpukpe South Africa. Ọ bụghị n'ụzọ doro anya ka Le Roux si akpọ ọgbakọ ya, bụ nke so na ngalaba CCCZ dị na South Africa. "Zaịọn" gụnyere aha ahụ.
Na 1908, ndị ozi ala ọzọ abụọ ọzọ na njikọ CCCZ bịara South Africa. Ndị a abụọ ahapụla CCCZ wee nata baptism nke Mmụọ Nsọ na Street Azusa na 1906. Ozi ha bụ ihe ịga nke ọma, ọtụtụ ndị na-acha ọcha, ndị Afrika na-asụ South Africa bụ ndị nabatara ozi Pentikọstal ha. N'oge ndị mbụ ahụ, ndị na-agba ojii na ndị na-acha ọcha na-agbakọta ngwa ngwa (Sewapa 2016: 20). N'oge na-adịghị anya, ndị ozi ala ọzọ gara leta Pieter Le Roux na ọgbakọ ya na Wakkerstroom. Pieter Le Roux nwere ịnụ ọkụ n'obi banyere ozi Pentikọstal nke ndị ozi ala ọzọ a, o kpebikwara isonye ha na Missionolic Faith Mission (AFM). Ọtụtụ n'ime ọgbakọ ya sonyeere ya, ọ bụ ezie na ha siri ọnwụ ịnọgide na-ede aha ha, ma ghọọ onye a maara dị ka Alaka Zionist nke AFM. Otu n'ime ndị òtù Wakkerstroom bụ Ịlaịja Mahlangu, bụ onye na-edu otu ọgbakọ n'otu obodo dị na Johannesburg (Morton 2016). O yiri ka ọ na-eji aha Zion Zion Church (ZAC), ọ bụ ezie na chọọchị ahụ bụ akụkụ nke AFM.
Engenas Lekganyane bịara AFM / ZAC na 1911 ma ọ bụ 1912 iji chọọ ọgwụgwọ nke anya ya. Dị ka ụfọdụ si kwuo, nsogbu ahụ ike ya mere ka ọ ghara ịgbaso oku ya na nrọ na 1910 (Moripe 1996: 19). Ịlaịja Mahlangu mere ya baptism site na baptism atọ n'ime osimiri na-asọ asọ, ma gwọọ anya ya na usoro ahụ. Mgbe nke a gasịrị, Lekganyane laghachiri na Limpopo iji rụọ ọrụ, na-achọkwa ọrụ nzi ozi ya. Mahlangu na-akwado Lekganyane, ma ọ pụghị inweta nzere site n'aka onye isi nke AFM (Morton 2016). Dị ka onye nkwusa, Lekganyane rụkọrọ ọrụ ọnụ na Pieter Le Roux na Elijah Mahlangu na AFM / ZAC. Mgbe enwere esemokwu agbụrụ na AFM, Mahlangu na ọgbakọ ya si AFM, na 1916, na Lekganyane soro ya. O yiri ka e debere Lekganyane na ZAC mgbe ọ gasịrị (Morton a).
Ọ bụ ihe nkịtị na ZAC iji yi uwe elu ogologo, dị ka ndị nchụàjà nke Agba Ochie ga-eyi. Ọzọkwa, a gbara ndị isi chọọchị ume ka ha na-eto eto afụ ọnụ ha. N'ime ọrụ ụka, akpụghị akpụkpọ ụkwụ. Lekganyane ekweghị na iwu ndị a, ya na Mahlangu na-alụ ọgụ. Ihe ọzọ nwere ike ime ka esemokwu bụ na ụfọdụ ndị òtù họọrọ ike ịgwọ ọrịa Lekganyane na ndị nkwusa ndị ọzọ. Ebe ụfọdụ na-ahụ ọhụụ nke abụọ Lekganyane hụrụ n'oge a. N'otu oge, mgbe ị na-ekpe ekpere n'ugwu, Chineke kpughere onwe ya na Lekganyane na oké ifufe nke kwụsịrị okpu ya. Lekganyane rịọrọ Chineke ka o mee ya ọzọ, ọzọ, okpu ya gbapụrụ. Oge nke abụọ a, okpu ahụ bụ isi ma jupụta epupụta. Lekganyane hụrụ nke a dịka ihe ịrịba ama na ọtụtụ ndị ga-eso ya. Na 1920, o hapụrụ ZAC na ọgbakọ ya ka ha sonye na Mission Zionic Apostolic Faith (ZAFM) (Morton 2016). E guzobere ZAFM na 1919, dịka alaka ụlọ ọrụ nke AFM, na Edward Motaung (nke a makwaara dịka Lion) dịka onye ndu ya. ZAFM gbasoro ihe atụ nke Zaịọn City na Illinois site n'ịzụta ala na ntọala Zion City n'ime obodo Kolonyama na Lesotho dị ugbu a. N'ime ZAFM Lekganyane ghọrọ Bishop nke ógbè dị n'ebe ugwu, ọ nọkwa na mpaghara Mamabolo nso Polokwane. N'obodo Zion, Edward Motaung kwupụtara na ya bụ "nwanne Jizọs" ma mee ka "nkwupụta mmekọahụ," bụ nke a na-atụ anya na ndị inyom nọ na chọọchị ga-anọnyere ya n'oge ụfọdụ. Maka mmekorita nwoke na nwanyi, enwere ike ichu odum n'aka AFM na 1923. A maghị ihe Lekganyane chere banyere ihe ndị a. O yiri ka o guzobere ntọala siri ike nke ndị na-eso ụzọ na Limpopo, na mgbe arụmụka dị n'etiti Lekganyane na ndị ndu ụka, ọ malitere ntọala Zion Christian Church na njedebe 1924 ma ọ bụ n'oge 1925. Engenas Lekganyane nọgidere na-ele Edward Motaung anya mgbe nile, ma kpọọ ya otu n'ime ụmụ ya ndị na-eso ya.
Lekganyane bụ onye na-agwọ ọrịa, onye amụma, na onye ọrụ ebube. Ọ nwere ike ịgwọ ọrịa na nsogbu ndị dị ka enweghị ọrụ, kwuru na ha buru amụma na mmeri nke Germany na WW m, a makwaara ya dị ka nnukwu mmiri ozuzo. N'ụlọ ya dị nso na Polokwane, Lekganyane nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ, ma eleghị anya, eziokwu ahụ bụ na ọ bụ nwa nwa nke agwọ ọrịa a ma ama. Ma, ọ dị ka ịlụso ike ọgụ na-eme ka onyeisi obodo mamabolo too. Ndị na-eso Lekganyane wetara ya onyinye na akụkụ nke owuwe ihe ubi ha; ha na-ele ya anya dị ka onyeisi. Mgbe Lekganyane bidoro nzukọ ekpere maka Wednesday maka ndị inyom, onyeisi ahụ kwuru na ndị inyom ga-arụ ọrụ n'ugbo ya na Wednesday (Wouters 2014: 61). Nwa nwanyi di ime nke choro ije oru n'elu ala onye isi ka enyere ya aka na nwa ya. Lekganyane wetara onyeisi na ụlọikpe, ma nye iwu ka ọ kwụọ nwanyị ahụ R 200 ụgwọ. Mgbe ihe omume a gasịrị, Lekganyane enweghị ike ịnọ na ala nke onyeisi mamabole. O bu ụzọ gaa n'ala nke dị nso, na 1942, site n'enyemaka nke ndị na-eso ụzọ ya, o nwere ike ịzụta ala ubi na Boyne, kilomita iri ise n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Polokwane, nke ọ gụrụ Moria.
Engenas Lekganyane nwụrụ mgbe ọ nwụsịrị na 1948. Ọ kpọghị onye na-anọchi ya, nwa ya nwoke bụ Banabas nwụrụ ọnwa asaa mgbe ọ gụsịrị Engenas, tupu e mechaa oge iru újú ahụ (Wouters 2014: 63). Ụmụ ya ndị na-anwụ ndụ bụ Edward na Joseph nọ n'ọnọdụ abụọ. Mgbe Edward na-arụ ọrụ na Johannesburg n'oge nna ya nwụrụ, Josef nọ n'akụkụ ya na Moria. N'ikpeazụ, Edward ghọrọ onye ndú nke nnukwu ìgwè, nke nọgidere na-akpọ ZCC, na ọ họọrọ kpakpando ise a kapịrị ọnụ dị ka ihe nnọchianya ya. 'Engenas' nwa Josef tọrọ ntọala ọhụrụ, nke a na-akpọ St. Engenas ZCC, na nduru dị ka ihe nnọchianya ya. Josef biri na moria nke mbụ, ma Edward mere onwe ya ihe dịka 1.5 site n'ebe ahụ.
Edward Lekganyane bi na 1928 ruo 1967. O tinyere oge na ume dị ukwuu n'ikwusa ozi ọma n'obodo ukwu ndị dị n'obodo Gauteng, Limpopo na Mpumalanga (Morton nd b). Ọ bụ ezie na Engenas bụ onye ndú na-adọrọ mmasị nke natara ikike ya site na onyinye ya ọgwụgwọ na amụma, Edward weere òkè dịka onye bishọp na-elekọta ndị ọzọ (Anderson 1999: 292). Ọ bụ Edward onye gbanwere Moria ka ọ ghọọ Ezi Zion City. [Foto dị n'aka nri] O guzobere ìgwè ndị mara mma nke na-anabata ndị njem ala na Moria na 1951, ma wuo chọọchị na Moria, nke e dechara na 1962 (Müller 2011: 14). Ọ bụkwa onye na-eme amara na-eme ka ya na Njikọ Apartheid dịgide, na-akpọ ndị nnọchiteanya gọọmenti na Ememe Ista na Moria na 1965. Site na 1963 ruo 1966 Edward natara nkuzi mmụta okpukpe na kọleji Dutch Reformed maka ndị nkwusa ozigbo nso Moria, mkpebi nke ọ bụghị onye ọ bụla kwadoro.
N'oge nduzi Edward Lekganyane, nnukwu breakaway sitere na ZCC mere mgbe Frederick Modise malitere chọọchị ya, Chọọchị Pentikọstal nke Mba Nile (IPHC). Modise bụ onye ozi nke ụlọ ụka ZCC dị na Soweto, yana onye ọchụnta ego bara ọgaranya. Mgbe ihe na-adịghị mma (ohi, akụ na ụba, ọrịa na ọnwụ nke ụmụ ya) Modise hụrụ onwe ya na ụlọ ọgwụ. Na September 1962, mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ, Modise nụrụ olu na-agwa ya ka ọ na-ekpe ekpere, ma hụ ọhụụ nke ìgwè mmadụ na-ehulata ala na-ekpe ekpere. O mechara nweta onyinye nke ọgwụgwọ ime mmụọ. Mgbe o kpesịrị ekpere maka ọtụtụ ndị ọrịa nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị a gwọrọ, a gwọrọ ya ma hapụ onwe ya na October 1962. Mgbe ahụmahụ a gasịrị, Modise malitere chọọchị ya. Dịka ZCC, IPHC bụ ụka nke ọgwụgwọ dị ezigbo mkpa. Ọ dịkwa iche na ZCC na ọtụtụ akụkọ. IPHC bụ ụka ezumike, na-eme ụbọchị Onyenwe anyị n'ụbọchị Satọdee karịa Sunday. Ọzọkwa, IPHC na-agbasi mgba ike megide omume ọdịnala Africa, dịka asọpụrụ ndị nna ochie, ebe ZCC na-ejikọta ya na omume ya (Anderson 1992).
Mgbe Edward Lekganyane nwụsịrị na ọrịa 1967, a họpụtara nwa ya nwoke bụ Barnabas Ramarumo onye ndu ọhụrụ nke ZCC. N'ihi na Banabas n'oge ahụ dị nanị afọ iri na atọ, a họpụtara onye nlekọta ilekọta azụmahịa nke ụlọ ụka. Onye nlekọta a bụ onye mbụ L. Mohale. Mgbe otu afọ gachara, M. Letsoalo nọchitere ya, onye na-edu ụka ahụ ruo 1975, mgbe Banabas dị afọ iri abụọ na otu wee bụrụ onyeisi nke chọọchị ahụ. A maghị ihe banyere Barnabas Lekganyane. A na-akpọ ya "onye ndu nzuzo" na ụfọdụ akwụkwọ, ọ na-esikarị na-agwa ndị nta akụkọ ma ọ bụ ndị nchọpụta okwu. Dị ka nna ya, Banabas nwetara ọzụzụ mmụta okpukpe site na ịme ihe omume Bible (Müller 2011: 15). Ọ na-esokwa nna ya na ya na ndị ọchịchị Apartheid dị n'ezigbo mma. Barnabas Lekganyane bụ onye ndú nke ZCC ruo taa.
N'agbanyeghị na ọtụtụ ndị òtù na ndụ dị adị, akwụkwọ agụmakwụkwọ na akwụkwọ ndị ọzọ na ZCC dị oke ụkọ. Chọọchị na-ala azụ ịmeghe onwe ya nye ndị ọkà mmụta ma ọ bụ ndị nta akụkọ, na nzuzo bụ otu ihe dị mkpa n'echiche nke onye ahụ na chọọchị. Akwụkwọ nke ụka n'onwe ya anaghị adị njikere, ndị ndú ụka na-ewepụta echiche ha na okwu okwu kama ịde akwụkwọ. Eziokwu ahụ bụ na chọọchị anaghị enwe akwụkwọ nkà mmụta okpukpe nke nwere ike itinye aka na enweghị nkuzi doro anya. Ihe omumu bu nani ihe di mkpa nke uka maka ndi otu ya. Ndị òtù sonyere ZCC n'ihi na ha na-achọ ọgwụgwọ, ngọzi, na nchebe megide ihe ọjọọ. Ozizi na nkwupụta ndị ọzọ sitere n'okwukwe adịghị eme ka ndị òtù na-aga ZCC, mana ọrụ ebube na ọgwụgwọ na-eme (Moripe 1996: 108f).
Dị ka iwu si kwuo, nzube nke ZCC bụ ịgbasa Okwu Chineke na Oziọma Jizọs Kraịst n'ụwa (Moripe 1996: 223). ZCC bụ ụka Ndị Kraịst, ozizi Alexander Dowie CCCZ na-emetụta ya, ma debe ya na map Afrika nke eluigwe na ala. Dịka CCCZ, ZCC guzobere Zion City, na Moria. Alexander Dowie hiwere Zion City dị ka ebe mgbaba nke Ndị Kraịst nwere ike ịgbaso iwu nke ndụ ha. Dị ka CCCZ, ZCC gbochire iji ụtaba, ọgwụ ọjọọ, mmanya na anụ ezi, ma mee baptism site na nmikpu atọ n'ime mmiri na-asọpụta. Na South Africa, echiche nke obodo Zion City nwetakwuru ihe. Ala bụ okwu nke mmetụta uche na nke dị na Southern Africa, bụ ebe ọtụtụ ndị ojii ojii nọ na-eche na a na-ese ha n'ala ha site n'aka ndị ọcha, ndị ọchịchị colonial na ọbụna ụka dị iche iche. Nke a bụ ikpe na mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, mgbe ọtụtụ ndị Africa ojii furu ala ha n'Agha Anglo-Boer, dịka ọ dị ugbu a (Sullivan 2013: 26). Edward Motaung's ZAFM bụ otu n'ime ndị mbụ chọtara otu obodo Sierra Zion dị na Lesotho ugbu a. Engenas Lekganyane gbasoro ihe nlereanya ya site na ịzụta ala mgbe ya na onyeisi obodo Mamabolo rụsịrị, ma wuo obodo Zaịọn nke ya.
Ihe ọzọ doro anya yiri nke Alexander Dowie's CCCZ bụ na chọọchị na-elekwasị anya n'ịgwọ ọrịa. Iji ghọta ọgwụgwọ na ZCC, Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịkọpụta ihe ndị ọzọ gbasara nkwenkwe ọdịnala Africa bụ nke a na-anyadokwa ya. N'ihe gbasara Okpukpe Omenala Africa (ATRs) nwere echiche nke Chineke kachasị elu, Chineke a na-adịkarị n'ebe dịpụrụ adịpụ ma ụmụ mmadụ apụghị ịbịaru ya nso. N'aka nke ọzọ, mmụọ ndị nna ochie nwere ike inye aka n'ihe ọ bụla kwa ụbọchị. E kweere na nsogbu niile dị n'ime ụwa na-akpata ọgba aghara na ụwa ime mmụọ. Nsogbu ndị a nwere ike ịdaba na ahụ ike, ma ọ ga-adaba na ọrụ ọ bụla, dịka azụmahịa, ọrụ ugbo ma ọ bụ alụmdi na nwunye. Site na ọdịda Afrika, ọ dịghị ọdịiche doro anya n'etiti ahụike ahụ na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ nwere ike imetụta ọdịmma mmadụ. Dika nkwenye Afrika si eche banyere ogwu, onye ogbugbo n'etiti ndi mmadu na uwa nke mo bu ihe di mkpa. Onye na-achị achị ma ọ bụ onye isi na-enwekarị ọrụ mgbasa ozi na mpaghara obodo. Ọ bụrụ na onye na-achị achị nọ n'ọnọdụ dị mma na ụwa mmụọ, obodo ya ga-eme nke ọma. Ndị odeakwụkwọ bụ ndị ọkachamara nke okpukpe bụ ndị nwere ike ịchọpụta nsogbu dị n'ime ụwa ime mmụọ, dịka nna ochie mejọrọ ma ọ bụ mmegide nke ndị mmụọ ọjọọ, ndị dibịa afa ma ọ bụ ndị amoosu, ma kwuo ihe omume na ọgwụ ndị dị mkpa iji weghachite ahụike.
Dị ka ọtụtụ ATR, ZCC bụ ụka nke na-elekwasị anya na imeri nsogbu n'ụwa, kama na nzọpụta na-esote. N'ime ụka, bishọp ahụ, ọnọdụ nke ọgbọ atọ nke Lekganyanes nọ ruo ugbu a, nwere ọrụ onye ogbugbo na ụwa ime mmụọ maka ndị ya. Site na bishọp ahụ, ndị òtù ZCC ga-enweta ngọzi. Na ọkwa nke onwe, ndị amụma n'ime ZCC bụ ndị ọrụ mgbasaozi. Ha nwere onyinye iji chọpụta nsogbu ndị dị na ụwa ime mmụọ na-akpata enweghị ahụ ike n'ụwa nkịtị. N'ime ZCC, nsogbu ndị a na-ejikarị eme ihe n'ụzọ Ndị Kraịst, dịka ihe si na-emehie na dịka mmụọ ọjọọ si apụta. N'ọnọdụ ụfọdụ, a pụrụ ịkọ amoosu ma ọ bụ ịgba afa dịka ihe kpatara ya (Wouters 2014: 106). A na-ekwenye na mmehie na-eme ka nchebe nke Mmụọ Nsọ pụọ, si otú ahụ na-ahapụ ndị òtù ọjọọ na ndị mmụọ ọjọọ na ndị amoosu ma ọ bụ ndị dibịa afa. Ya mere, nkwupụta nke mmehie bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla dị mkpa maka ịgwọ ọrịa. Onye amụma ZCC na-enweta ozi a ọ bụghị naanị site na Mmụọ Nsọ, kamakwa, dị ka onye nchụpụ, site na ndị nna ochie. Dị ka ndị òtù ZCC si kwuo, onye nwere nna ochie nwere ike ịghọ onye mgba afa, ma ọ bụ, ọ bụrụ na e mere ya baptism na ZCC, onye amụma (Anderson 1999: 302). Dị ka ndị na-agba afa, a na-akpọ ndị amụma site na nrọ na ahụmahụ nke ọrịa ogologo oge. N'ime oge ọmụmụ, a na-azụ ndị amụma n'ịkọ nrọ na nyocha na ịgwọ ọrịa.
ZCC bụ ụka a na-ahụ anya na South Africa, ọ bụ n'ihi uwe ejiji ndị òtù ya. Ejikọta dị mkpa n'ọtụtụ AIC. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụka ndị ọzọ dị na Zaịist họọrọ uwe mwụda ọcha, ZCC ahọrọla ụdị uwe agha ndị ọzọ, na-echetara ndị agha Britain na ndị agha na ndị agha South Africa nke oge a, maka ndị òtù ya (Comaroff 1985: 243). A na-eyi uwe a naanị na chọọchị. Ma ndị òtù nwoke na-etinyekarị okpu nke edo edo na ndụ kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ndị òtù ZCC na-ejikarị kpakpando ọla edo edo edoziri edozi na ZCC na ya mgbe niile. [Foto dị n'aka nri] Ndị òtù ZCC na-ejigharị baajị ya na kpakpando ise edoziri edozi nke ZCC depụtara na ya. Omume a bụ Engenas Lekganyane na 1928. A na-ehichapụ badịjị ahụ na ákwà oji, nke a na-agbanye ya na ákwà na-acha akwụkwọ ndụ. A na-eyi baajị na uwe onye otu, n'akụkụ aka ekpe nke obi. A na-eyi baajị kwa ụbọchị. Nke a na-eme ka ọ dị mfe maka ndị òtù na-aghọta ibe ha, na-enyekwa echiche nke ndị otu na ezinụlọ (Wouters 2014: 125). A na-ekwenye na badgere ahụ iji chebe onye na-ekpuchi ihe ọ bụla dị iche iche (Hanekom 1975: 3).
N'adịghị ka badge ahụ, nke a na-eyi kwa ụbọchị, a na-eyi uwe naanị na ememe. Ndị uwe ZCC ahụ e mere baptizim nwere ike inweta edo edo. Maka ndị mmadụ, otu ejiji acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ. A na-eji ọla edo edozi ihe ndị a na-eji ejiji nke ndị isi chọọchị. Ndị nkwusa ozioma nwere otu odo odo na ala nke uwe aka ha, ndị ozi nwere ọnyá odo odo abụọ na ala aka uwe ha, ebe bishọp nwere ọnyá atọ. Nye ụmụ nwanyị, uwe edozi bụ uwe na-acha akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na uwe ejiji na-acha odo odo na isi iyi green-green greenhouse. Ntucha na-acha odo odo na-acha odo odo na-egosi ọnọdụ onye otu (2014 Wouters: 135). Ihe odide a na-acha anụnụ anụnụ nke a na-ejikọta n'olu ahụ bụ maka ndị nwunye ozi. Ihe odide na-acha anụnụ anụnụ nke na-agbanye n'olu na-egosi na onye na-ahụ maka ya bụ onye na-elekọta ndị inyom na ndị nleta na ụlọ ụka.
Ndị òtù ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke nwere nke ha, dị iche iche, uwe. Ndị kachasị mara nke ọma bụ mokhuku, ìgwè ndị na-agba egwú nwoke. [Foto dị n'aka nri] Ha na-eyi jaket khaki na uwe mwụda, uwe elu na agba aja aja. Na edo na-abịa na-eji agha agha akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na ZCC kpakpando dị n'ihu. Nke a bụ okpu nke a ga-eyi kwa ụbọchị. Ndị òtù Mokhuku na-eyi akwa akpụkpọ ụkwụ buru ibu na akwa chaba. Ịbụ onye òtù na-ekpo ọkụ nwere ike ịbụ oge na ume. Egwú ha bụ ịwụ elu na ịkụda n'ala, omume nke na-echetara egwú egwú Zulu. N'ụzọ yiri nke ahụ, a na-ekwere ụdị ịgba egwú a ka ọ "zọọ ihe ọjọọ n'okpuru ụkwụ" site n'ịzọ ya na ájá (Moripe 1996: 101). Ha na-eme mgbe ọrụ abalị nke Friday na tupu ọrụ ehihie Sunday; ma nwee usoro omume ọzọ na Saturday na n'ime izu.
Enweghị ọtụtụ ụlọ ụka ZCC. A na-arụ ọrụ n'ụlọ, ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na karịsịa n'èzí. E nwere ọrụ ụka na Wednesday, karịsịa maka ndị inyom, na Fraịdee, na Sunday. Ọrụ isi nke ZCC bụ n'ehihie Sunday. Dị ka ọrụ ụka ọ bụla nke ndị Kraịst, e nwere ekpere, ịgụ Bible, abụ a ga-agụ na ozizi. Otú ọ dị, ọrụ ụlọ ọrụ ZCC nwekwara ihe ndị dị mkpa ha. Tupu e abanye n'ọgbakọ ndị ụka, a na-fesa ya mmiri. Mmiri a na-asachapụ ndị sonyere na chọọchị ahụ site na mmetọ (Wouters 2014: 115f), a na-ekwukwa na ọ na-egosi ọrịa ọ bụla (Anderson 2000: 149). Tupu ọrụ ụlọ ụka ahụ amalite, ụmụ choro dị ka ndị mokhuku na ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ na mbara oghere n'ihu ebe a na-eje ozi ahụ. Ọzọkwa, ndị na-abụrụ ndị na-egwu egwú na-agbakọta n'otu gburugburu iji kpọọ ala Mmụọ Nsọ. Egwuregwu ịgba egwú dị ka egwú nke ndị Pedi na-asụ, na ụmụ nwoke na-eme ogologo jumps, na ndị inyom na-agba egwú n'ịgba ụba. Nke a bụ nanị oge ndị ikom na ndị inyom na-agba egwú ma na-abụkọ ọnụ, ọ bụ ezie na ụmụ nwoke na-egwu egwu n'otu akụkụ nke gburugburu na ndị inyom n'akụkụ nke ọzọ (Wouters 2014: 187).
Ọrụ ahụ nwere abụ, ekpere na ikwusa ozi ọma. N'oge ọrụ ahụ, ndị isi (ndị ozi) na-anọ n'elu ikpo okwu na njedebe nke ohere. Ha na-eme nkwusa ahụ, ọtụtụ mgbe n'ọtụtụ. Ọ bụ ezie na ndị inyom na-ekwusara ozi n'oge Wednesday, a naghị anabata ha na ikpo okwu a (Wouters 2014: 121). Na ndị na-ege ntị, ndị ikom na ndị inyom na-anọdụ ala iche iche. Mgbe ị na-eche ihu n'elu ikpo okwu, ndị inyom bụ nọ n'akụkụ aka ekpe na ndị ikom n'akụkụ aka nri. A na-ejikọta ndị inyom na ndị ikom dị ka uwe ha na-eyi. [Foto dị n'aka nri] Nkwusa na-adaberekarị na ihe akaebe banyere ọgwụgwọ na akụkọ ndị ọzọ, kwuru na nzaghachi na ịgụ ụfọdụ amaokwu Bible. N'oge ọrụ ụka, ndị amụma, nke Mmụọ Nsọ na-edu, na-agagharị na ndị na-esonye n'ọgbakọ. Mgbe ụfọdụ, a na-ezite ozi sitere n'aka Chineke n'ime ọrụ ahụ; n'oge ndị ọzọ a na-akpọrọ onye otu ọgbakọ gaa na ebe zoro ezo ka ọ nwee ike ịjụ ya. Ịṅa ntị na okwuchukwu ahụ yiri ka ọ bụ ihe abụọ na-enweta ọgwụgwọ.
Amụma na ZCC bụ ozi na-agụnye ma ọgwụgwọ na pastoral nlekọta. Enwere ike ịbute nsogbu ọ bụla n'ihu ndị amụma maka enyemaka ha. Amụma dị iche iche kachasị bụrụ amụma bụ amụma nyocha, nke e ji achọpụta ihe kpatara ọrịa. Mgbe a chọpụtachara ihe na-adịghị mma, onye amụma ahụ na-akọwa ihe omume, dị ka ikpe ekpere ma ọ bụ ịgụ Akwụkwọ Nsọ, iji mmiri, tii ma ọ bụ kọfị, ma ọ bụ ọbụna yi akwa (Wouters 2014: 161). A pụkwara iji ihe ndị a gọziri agọzi mee ihe, dị ka akwa ákwà, ụdọ, aịlị, ma ọ bụ osisi na-arụ ọrụ. Ọtụtụ mgbe, ihe ndị amụma ahụ kwuru na-achọ ọrụ onye na-agwọ ọrịa, dị ka ịkwadebe mmiri ọgwụgwọ, ime ememme nchedo, na ịgọzi ihe. Usoro kachasị na agwọ ọrịa na ZCC bụ inyefe mmiri na-enye aka. Mmiri na-agọzi site n'ekpere onye ụkọchukwu ma ọ bụ site na bishọp n'onwe ya. Ọ bụ ekpere a nke na-enye mmiri ahụ ike ya. A na-ekesa mmiri a gọziri agọzi n'ihe ndị mmadụ na ndị mmadụ na-eme ka ha dị ọcha, gọzie ma chebe ha. E wezụga mmiri, ZCC na-ejikwa tii na kọfị pụrụ iche maka nzube agwọ. N'ime ndị ọrịa niile na-arụ ọrụ na chọọchị ahụ, a sịrị bishọp nwere ikike kachasị ike nke ịgwọ ọrịa na ngọzi. Ọbụna bishọp ugbu a ka na-arịọ ka ị gaa ebe ndị nwere ụkọ mmiri ozuzo iji mee ka mmiri zoo (Wouters 2014: 171). Ndị òtù ZCC na-ala azụ iji biomedicine, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ gaghị egbochi ya. Nlekọta ahụike nwere ike idozi nsogbu ahụ ike ụfọdụ, ebe ọgwụgwọ na ZCC nwere ike wepụ ihe mbụ kpatara nsogbu (Wouters 2014: 219).
Sacramenti kachasi mkpa na ZCC bu baptism nke ndi okenye. [Foto dị n'aka nri] anaghị ekwe ka ndị na-abụghị ndị otu kirie emume a. A na-agba ndị na-eto eto nọ n’afọ iri na asatọ ume ka e mee ha baptizim. N'ihi na ịghọ onye otu ZCC chọrọ itinye aka na iwu siri ike na nkwanye, ọ bụ naanị ndị okenye, ọ bụghị ụmụaka, ka a ga-eme baptism. Tupu e mee gị baptizim, ndị ọhụụ ga-abụ ndị otu ZCC na-eduzi ndị okenye ka ha mụta ụkpụrụ omume nke ZCC. Mgbe ọzụzụ a, a na-enwe mkparịta ụka ụfọdụ ndị okenye nke otu nwoke na nwanyị. ZCC na-eme baptism site na nmikpu zuru oke, ọkacha mma na mmiri na-agba agba dị ka osimiri. Tupu ịbanye na mmiri, onye ahụ ga-abụ onye otu ga-ekwupụta mmehie ha. ZCC na-agbaso usoro nke imikpu mmadụ atọ nke onye ụkọchukwu, yiri ụlọ ụka Dowie na Zayọn. A na-ahụ Baptism dị ka emume nsacha na ọgwụgwọ. Ezigbo ahụike bụ naanị mgbe a ga-eme gị baptizim (Wouter 2014: 153). Mgbe emechara baptizim, a na-ahapụ onye otu ka ọ eyi uwe ZCC na baajị. Alụmdi na nwunye adịghị ka oge ememme dị mkpa maka ZCC. E kwere ka ndị otu ZCC na-eme ihe karịrị otu nwanyị, nke bụ iwu na South Africa. N'ihi ọnọdụ akụ na ụba siri ike na ịtọhapụ ụmụ nwanyị, ịlụ karịa otu nwanyị abụghị ihe a na-ahụkarị.
A na-atụ anya na ndị otu ga-eleta isi ụlọ ụka ahụ na Zion City Moria [Foto dị n'aka nri] ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ, ma ọ bụ na nzukọ Ista ma ọ bụ na ogbako na Septemba. Kwa afọ ihe ruru otu nde ndị otu ZCC na-aga Moria ka ha nweta ngọzi nke bishọp na ndụ ha (Kruger na Saayman 2014: 29). Karịsịa mgbakọ niile Ista na-adọta ọtụtụ puku ndị kwere ekwe. Zion City Moria aghọwo ebe etiti nke ememe, ebe ngọzi, nnapụta na ọgwụgwọ, ebe mmadụ nwere ike ịbịaru ike nke Chineke (Anderson 1999: 297). Ọ bụ ezie na Nzukọ Ista bụ nke kachasị mkpa, Nzukọ ahụ na Septemba na-agakwa nke ọma. A na-ahụta ogbako a dị ka ememme Afọ Ọhụrụ na ememme ekele maka owuwe ihe ubi (Moripe 1996: 65). Ememme a na-emetụta ememme mkpụrụ osisi mbụ nke amara site n'ọtụtụ ATR. Otu ọrụ dị oke mkpa nke bishọp, na n'ezie ọrụ ọ kachasị hụ anya, bụ ịduzi nzukọ a na-eme kwa afọ na Moria. Ebe dị elu nke njem uka bụ ịnabata ndị njem ala site na bishọp, na-eduga usoro mgbatị nke ọla kọpa ya (Müller 2011: 116). Ọ bụ bishọp na-elekọta naanị Oriri Nsọ na nzukọ abụọ a na-eme kwa afọ na Moria.
Ugbua na 1925, ihe na-erughi otu afọ mgbe e guzobesịrị chọọchị ahụ, Engenas Lekganyane nwara ịnata ọkwa na nkwado nke chọọchị ya site n'aka gọọmentị. Na ngwa ya, Lekganyane kwuru na 925 na-akwado ya na ọgbakọ iri na ise. Ọtụtụ ihe nwere ike mee ka ị jụ akwụkwọ a. N'oge ahụ, ndị gọọmentị ghọtara na ndị obodo amaala dịka ihe mkpesa na mmemme maka nnwere onwe. Na 1921, ndị uweojii kpara nkata na òtù okpukpe ọzọ, na-ahapụ ndị na-eso 163 nwụrụ. Ịghara ịjụ ngwa ngwa Lekganyane nwere ike ịbụ otu n'ime mgbalị iji kụda mmụọ nke ụmụ amaala Africa (Anderson 1999: 289). Ebumnuche ọzọ nwere ike ịbụ na Edward Motaung's ZAFM na-achọ nzere ntozu n'otu oge ahụ, nakwa na a kpọrọ ndị na-eso Lekganyane dịka ndị òtù ZAFM na ngwa ya. Nke a kpatara obi abụọ ma Lekganyane nwere ihe ndị na-esonụ (Wouters 2014: 59).
ZCC toro ngwa ngwa, site n'aka ndị 926 nọ na 1926 gaa na 2.000 na 1935, na 8.500 na 1940 na 27.487 na 1942. Ndị na-asụ Sotho na-etolite ọtụtụ ndị òtù, ma ụka nwere ndị sitere na agbụrụ dị iche iche, na-arụkwa ọrụ na Botswana na mba ndị ọzọ dị na Southern Africa. Dị ka nyocha nke 2001 na South Africa, ZCC nwere ihe gbasara 5,000,000 adherents, nke pụtara na pasent iri na otu nke ndị South Africa na 13.9 pasent nke Ndị Kraịst nọ na South Africa nọ na ZCC. Dịka ụka ahụ si kwuo, ndị òtù 16,000,000 nọ ugbu a n'ụwa dum, karịsịa na Southern Africa.
Bishọp bụ onye ndú kachasị nke ụka. Ọ bụ nanị ọgbọ atọ nke Lekganyanes na-edu ndú nke chọọchị ka enwetala aha bishop. Ọ bụ ezie na bishọp bụ onye dị oké ọnụ ahịa na ZCC, ọrụ ya bụ iji mee ka ọ dị n'etiti Chineke na ndị ya, ndị Lekganyanes na-ajụkarị nkwenye ma ọ bụ Chineke ọ bụla banyere nduzi ha. Mgbe ụfọdụ, ndị òtù ZCC na-ekpegara Chineke nke Engenas, Edward na Banabas ekpere. Chọọchị ndị ọzọ akọwawo nke a dị ka njirimara nke ọnọdụ Chineke nye ndị bishọp. N'aka nke ọzọ, Anderson na-akpọ aha ahụ dịka ịtụkwasị Chineke n'ime ihe gbasara Afrika, dịka ndị Isreal nwere ike ikpegara Chineke nke Abraham, Aịzik na Jekọb (Anderson 1999: 296).
Dịka onye ndú ụka, bishọp nwere ikike zuru oke na ikike na ihe niile gbasara chọọchị (Moripe 1996: 157). Dika iwu kwadoro, bishọp nwere ikike maka ndị niile na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na chọọchị, ọ na-edozi ajụjụ niile nke iwu. Nkọwara ya nke usoro ochichi ahụ bụ nke ikpeazụ. Bishọp na-enyere ndị odeakwụkwọ aka, ndị isi obodo, na ndị isi ụka ụka. Isi odeakwụkwọ nwere ọnọdụ oge nile, ọ bụkwa ya maka akwụkwọ ozi chọọchị na ihe ọ bụla metụtara kwa ụbọchị na-emetụta ụka (Moripe 1996: 160). Ego nile nke chọọchị na-ewetara onye odeakwụkwọ ukwu, onye na-enyefe ha n'ime ụlọ akụ chọọchị. Ndị isi ụka nke isi ụka nwere nnukwu ndị ozi, ndị a na-akpọ ogidi (Moripe 1996: 154). Ndị isi ụka nke ụka na-ahụ maka okwu ndị ọgbakọ na-ebute site na ógbè mpaghara. Ọ na-ahọpụta ndị òtù nke ógbè ógbè ahụ site n'aka ndị na-elekọta ụlọ ọrụ nọ n'ógbè ahụ. A họpụtara onye isi oche nke ógbè ógbè ahụ dị ka ọ dị n'oge ochie. Ọ bụ bishọp na-ahọpụta odeakwụkwọ ukwu na ndị òtù ụka. Na-esote ndị isi ụlọ a, e nwere otu ndị isi n'ime obodo, nke na-arụ ọrụ dịka ụlọ ọrụ ndụmọdụ nye bishọp ahụ. Otu n'ime ndị òtù ezinụlọ a bụ (Wouters 2014: 170) na ọ bụ maka nhoputa nke bishọp ọhụrụ mgbe ọnwa bishọp gara aga nwụrụ. N'okwu niile gara aga, onye bishọp nwụrụ anwụ enwewo ihe ịga nke ọma site na nwa mbụ nke ndụ nke nwunye mbụ ya.
Dika iwu nke ụka si kwuo, ogbako obula kwesiri inwe ma obu ndi mmadu iri abuo na ise na onye oru ajuju (Moripe 1996: 109). Ọ bụ ọgbakọ na-ahọrọ onye ozi ahụ. Ọ na-ebikarị n'ime ọgbakọ ma na-eche otu ihe ịma aka ego dịka ndị nọ n'ọgbakọ ya. Ọ bụ ezie na nkwado mmụta nkà mmụta okpukpe na-agba ume, ZCC enweghị ụlọ akwụkwọ mahadum ma ọ bụ akwụkwọ Bible. Ọ bụghị ọtụtụ ndị ụkọchukwu anata ọzụzụ mmụta nkà mmụta. Onye ozi kwesịrị inwe àgwà ndị ndú na àgwà dị mma, karịa ọzụzụ dị elu (Moripe 1996: 155). Ọrụ ndị dịịrị onye ozi ahụ bụ ikwusa Oziọma ahụ, ikpe ekpere maka ndị ọrịa ma bikwasị ha aka n'isi, iji doo ụmụ ha nsọ, ime ndị kwere ekwe baptizim, inye udo dị nsọ, iji lie ndị nwụrụ anwụ na ịlụ di na nwunye (Moripe 1996: 158 ). Na omume, e nwere ihe ụfọdụ nke ọrụ iwu ndị a. Ọ bụ ikike nke bishọp iji nye udo dị nsọ na ogbako ọ bụla n'afọ Moria. Ndị ụkọchukwu anaghị anabatakwa ndị nwụrụ anwụ mgbe ọ bụla, n'ihi na ogologo oge ememe ememe ọcha mgbe ha na ozu nwụrụ anwụ ga-emetụta ọrụ ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ, mgbe a na-eli ozu, a naghị ekwe ka onye ụkọchukwu tinye aka na onye ọrịa ruo ụbọchị asaa (Moripe 1996: 46).
Ndị nkwusa ozioma, ndị na-ekwusa ozi ọma na ndị diakọn nwekwara ike ịnọ n'ọrụ n'ime ọgbakọ. Ndị nkwusa ozioma na-enyere onye ụkọchukwu aka n'ọrụ ya, ha nwere ikike kachasị elu mgbe onye ozi ahụ gasịrị (Moripe 1996: 155). Ndị nkwusa ozioma nwere ọrụ yiri nkea dịka onye ozi, ma ha ekweghị ka ha lụọ di na nwunye. A naghị ekwe ka ndị diakọl nwee ike ịlụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ doo ụmụaka nsọ. A na-ekwe ka ndị na-ekwusa ozi ọma kwusaa ozi ọma ma kpee ekpere maka ọgwụgwọ, na lie ndị nwụrụ anwụ. Onye ozi ahụ nwere ike ịhọpụta ndị ụka ka ha bụrụ ndị ndú nke klaasị ụka. Otu ndị isi chọọchị, ndị a họpụtara site na ọgbakọ na onye nlekọta na-elekọta, na-ahụ maka ihe omume nke ọgbakọ, karịsịa banyere ego na mkpebi nke esemokwu na onye ozi.
Ndị na-esote ndị isi iwu a bụ ndị amụma, ndị na-adịghị enwe ọfịs. Otú ọ dị, a na-akwanyere ndị amụma ùgwù nke ukwuu ma nwee ike ikwu okwu karịa ikike nke ndị isi obodo (Moripe 1996: 92f). Enweghi ihe ndi ozo iji kwado ndi amuma ma obu amuma. Amụma banyere ndị amụma a kwanyere ùgwù nabatara ikike ha. Amụma ndị ụkọchukwu nwere ike ikwenye site na ndị okenye, karịsịa ma ọ bụrụ na ha na-eche banyere ụka dum ma ọ bụ na-egosi ebubo nke amoosu ma ọ bụ ịgba afa (Moripe 1996: 154).
Nzuko dị iche iche nakwa ụka dum n'ozuzu ha nwere kọmitii ndị etinye aka na mkpebi ikpe, nke a kpọrọ kgoro. Ndị na-emebi iwu nke ụka nwere ike ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ baara gị mba. Ọ bụ ezie na ịdọ aka ná ntị buru ibu, a ga-enyekwa onye otu iwu iwu ịkwụ ụgwọ. Ụgwọ bie ụgwọ, ego ma ọ bụ anụ ụlọ, bishọp ahụ, bụ onye kpebiri ka esi eji ihe ndị a (Moripe 1996: 161).
A katọrọ ụkpụrụ nke ụka banyere ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa dịka nkpu. Karịsịa n'oge ọdịiche nke oge ọdịda na ọgba aghara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-etinyeghị aka megide ZCC (Müller 2015: 7) ndị òtù ZCC hụrụ chọọchị ahụ dị ka nke na-akwalite udo, na-ekwusi ike na mmekọrịta udo na ihe ọ bụla ọchịchị ahụ bụ (Wouters 2014: 176 ).
Ndi ochichi South Afrika bu ndi nenwegh ike ikwuputa uka ahu. Ma site na 1950s, echiche gọọmentị banyere ụka dị iche iche gbanwere mmetụta nke echiche nke okpukpe. Ugbu a, a na-agba ndị ụka ojii nkịtị ume n'ihi nnwere onwe ha, bụ nke a pụrụ ịkọwa dị ka separatism. N'aka nke ọzọ, a na-ahụ ụka dị iche iche nke oge ochie, dị ka ihe nhụsianya maka nkatọ ha na-eme banyere agbụrụ agbụrụ. ZCC, dị ka ụka ojii, nke a kwadebere nke ọma n'ime nkewapụrụ South Africa. N'aka nke ọzọ, ụka enwebeghị agbụrụ agbụrụ ọ bụla, na mgbasa ozi ya n'obodo ndị mepere emepe mere ka ndị òtù dị iche iche dịgasị iche iche (Müller 2015: 7). Ndị bishọp ZCC ejirila nwayọọ nwayọọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na echiche, ma n'otu oge ahụ na-agbalịsi ike ịmalite mmekọrịta dị mma na gọọmentị. A machibidoro ndị òtù ụka iwu ikere òkè na mkpesa ndọrọ ndọrọ ọchịchị (Anderson 1999: 294). Na 1960, nanị mgbe mgbuchapụ Sharpeville nke ndị uweojii South Africa gbara ọkụ na ndị mmegide ma gbuo 69 ha, Edward Lekganyane kpọrọ gọọmenti na ogbako Ista na Moria. Na 1965, gọọmenti nakweere òkù na Minista Bantu Affairs nke Wet Nel gara ememme Ista. Mgbe Edward malitere ọzụzụ ya na ụlọ akwụkwọ Dutch Reformed Theological School na Stofberg dị nso na Moria, otu ndị nọ na ZCC nwere iwe banyere nke a ma sonyere St Engenas ZCC nke Joseph Lekganyane (Kruger 1971: 27).
Dị ka nna ya n'ihu ya, Barnabas Ramarumo Lekganyane kpọsara ndị gọọmenti ka ha gaa nnọkọ Ista na Zayọn Moria. Na 1980, Minista Minista Bantu Piet Koornhof gara Moria. Nke a kpatara ọgba aghara ime ihe ike megide ZCC n'obodo dị na Johannesburg. Na 1981, Barnabas Lekganyane mere ka ọha na eze chefuo onwe ya banyere echiche ọdịnala nke ọchịchị. N'agbanyeghị nke ahụ, n'oge ememe ncheta nke ụka iri asaa na ise na 1985, a kpọrọ PW Botha. Ọzọ, nke a mere ka mwakpo ndị òtù ZCC na Soweto. Na 1992, n'oge ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agbụrụ, chọọchị ahụ kpọrọ ndị ndú atọ kachasị mmetụta: President De Klerk, Nelson Mandela na Mangosuthu Buthelezi. A hụrụ nke a dịka mbọ iji kwalite udo n'oge ime ihe ike (Anderson 1999: 294).
Mgbe Apartheid, South Africa ka bụ mba nke ọdịiche dị n'agbata ndị ọgaranya na ndị ogbenye bụ nnukwu oke, ma na-esote agbụrụ agbụrụ. N'ime obodo South Africa, ọ dịkarịa ala ụwa dị iche iche dị (Müller 2015: 8f). Otu bụ ụwa bara ọgaranya nke ndị ọcha na ndị ojii nọ n'ógbè ndị nwere nsogbu na ebe nchekwa na ala ịta ahịhịa. Ha nwere ike ibi ndụ ha kpamkpam site na nchegbu na nsogbu nke ọha mmadụ, nke ha na-ebugharị na ụgbọala ha nwere. Obodo ukwu nke obodo ukwu ma ọ bụ nke ụwa dị iche iche bụ ebe ọzọ dị iche iche dị na South Africa. N'obodo, ịnweta ọrụ ndị dị mkpa dịka ụlọ, mmiri na ọkụ eletrik, idebe ihe ọcha, nlekọta ahụike na agụmakwụkwọ na-adịkarị mkpa. Iji na-aga gburugburu, ndị mmadụ nọ n'ógbè ahụ na-adabere n'ọtụtụ ndị na-ebugharị ụgbọ okporo ígwè n'ụdị taxi na-adịghị mpe. Obodo ụwa dị n'ime obodo nwere njikọ chiri anya na ụwa ụwa a. Ụwa a ka dara ogbenye, ọtụtụ ndị na-akwagakwa n'obodo ndị mepere emepe na-enwe olileanya na ha ga-emesị nweta ohere ndị ụwa bara ọgaranya. Njikọ na netwọk okpukpe nwere ike ime mgbanwe site na ime ime obodo na mfe.
ZCC bụ otu n'ime ụka ndị na-ejikọta ma ndị ogbenye ụwa a. Ndị òtù ZCC na-ebikarị na-ebi na obodo ndị dị na obodo ndị bi n'obodo ukwu, na n'ime ime obodo. Ndị òtù ZCC bụ ndị ogbenye na ndị na-agụghị akwụkwọ. A na-akpọ ZCC aha ụka nke ịda ogbenye, bụ nke, n'adịghị ka chọọchị ndị nwere ọganihu na Pentikọstal, inweta akụ na ụba adịghị etiti etiti. Chọọchị dị iche iche na-ahụ maka ịkwado onye nlekọta bi. Otú ọ dị, ọtụtụ chọọchị dị iche iche, enweghị ike inye onye ozi ahụ zuru ezu. Ọnọdụ a abụghị kpọmkwem maka ZCC ma ọ bụ ọbụna ụka ụka Zayọn n'ozuzu ya, mana ụka na-enweta nnwere onwe site na chọọchị ụka ndị ọzọ.
Bishọp Barnabas Ramarumo Lekganyane, n'aka nke ọzọ, ọ bụghị nanị na-arụ ọrụ dịka onye ndú ime mmụọ, ọ bụkwa onye ọchụnta ego maara ihe. Ọ nwere ọrụ ụgbọ ala na ọtụtụ ụlọ ahịa (Moripe 1996: 150). N'okwu nke ịda ogbenye zuru ụwa ọnụ, ọhụụ nke Banabas Lekganyane na onye bu ya ụzọ, na-ebi na ebe obibi ma na-achịkwa ụgbọ elu ụgbọala, nwere ike ịchọta dị ka ihe na-akụ azụ. Otú ọ dị, ndị òtù ZCC na-enwe obi ụtọ maka akụnụba nke onye ndu ha, n'ihi na ọ bụ naanị onye ndú Chineke gọziri nwere ike ịme nke ọma, ndị òtù ahụ na-enwetakwa uru site na mmekọrịta bishọp na ụwa ime mmụọ site na ngwọta na ngọzi (Wouters 2014: 177 ). Ngosipụta ego nke bishọp nwere ike ọbụna (dịka ọ na-eme n'ọtụtụ ụka ozioma) na-adọta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-atụ anya inweta ụfọdụ n'ime ngọzi ego ndị a. Bishọp anaghị etinye akụ na ụba ya niile. Ma Edward na Banabas Lekganyane etinyewo ego maka akwụkwọ ndị isi, nke abụọ na ndị isi nke ndị òtù ha nwere nsogbu ego (Moripe 1996: 27). Chọọchị na-ejikwa ụlọ ọrụ ZCC nke azụmahịa na ego nrite maka olili ozu. Chọọchị na-enye ọrụ ndị ọrụ dika agụmakwụkwọ na ọha mmadụ na-eli ozu. ZCC na-echekwa n'obodo ndị mepere emepe na-enye ndị òtù ya ihe ndị dị mkpa dị ka kọfị, tii, mmanụ, na ntụ ọka, bụ nke a na-emekarị ka a kwado nsogbu. N'ụzọ dị otú a, ZCC na-enye ndị òtù ya mmetụta nke nnọchiteanya na nchekwa (Müller 2015: 9).
Nzukọ Ndị Kraịst ndị ọzọ anaghị ejide ZCC mgbe niile. Karịsịa ụka ụka Pentikọstal na-ejighị ihe ndị omenala ndị e webatara na nkà mmụta okpukpe ZCC na omume. Ndị Pentikọst na-achọ ịhapụ nkwenkwe ọdịnala Afrika dị ka ndị jụrụ okwukwe ma ọ bụ ọbụna Setan. Karịsịa ịchọta ndị mmụọ nna ochie site na ZCC hụrụ ha dịka ofufe ndị mmụọ ọjọọ (Sewapa 2016: 6). Ihe akaebe nke ndị ụka Pentikọstal na-ebubo boro ZCC maka ịchụ ụmụ mmadụ na Setan na arụrụala ndị ọzọ.
Foto #1: Foto nke Engenas (Ignatius) Barnabas Lekganyane.
Foto #2: Moria City.
Foto #3: akara ozi ZCC.
Foto #4: Ụmụ nwoke na-egwuri egwu na mokhuku.
Foto #5: Ndị nọ na ZCC ọrụ dị iche iche na agba.
Image #6: ememe baptism nke ZCC.
Image #7: Ndị njem ala na Moria City.
Anderson, Allan H. 2000. Zaịọn na Pentikọst: Ọnọdụ Ime Mmụọ na Ahụmahụ nke Pentikọstal na Zionist / Chọọchị Apostolic na South Africa. Pretoria: Mahadum South Africa Press.
Anderson, Allan H. 1999. "The Lekganyanes na Amụma na Zion Christian Church." Journal of Religion in Africa XXIX: 285-312.
Anderson, Allan H. 1992. "Frederick Modise na Chọọchị Pentikọst nke International: Òtù Na-ahụ Maka Mkpụrụ Obi n'Africa nke Oge A?" Missionalia 20: 186-200.
Comaroff, Jean, 1985. Isi nke Ike Mmụọ nke Nguzogide: Culture na History nke ndị South Africa. Chicago: Mahadum Chicago Press.
Hanekom, Christof. 1975. Krisis en Kultus: Geloofsopvattinge en Seremonies binne 'n Swart Kerk, Kaapstad: Academica.
Kruger, MA 1972. "Ọ bụrụ na ị na-anwụ anwụ, ị ga-anwụ anwụ na Chọọchị Ndị Kraịst." Na Die Skriflig 6: 13-32.
Kruger, Martinette na Melville Saayman. 2016. "Ịghọta Zion Christian Church (ZCC) ndị pilgrim." Nnyocha International Journal of Tourism Research 18: 27-38.
Moripe, Simon. 1996. Òtù na Management nke Zion Christian Church. Ph.D. akwukwo, Mahadum Durban.
Morton, Barry. nda "Engenas Lekganyane na Early ZCC: Oral Texts and Documents." Nweta site na https://www.academia.edu/14338013 /Engenas_Lekganyane _and_the_Early_ZCC_Oral _Texts_and_Documents na 20 May 2019.
Morton, Nwoke. ndb “Edward Lekganyane na ZCC: Akwụkwọ akụkọ dị na Naledi ya Batswana, 1946-1960.” Nweta site na href = ”https://www.academia.edu/35243058/Edward_Lekganyane_and_the _ZCC_Newspaper_Articles_in_Naledi_ya_Batswana_1946-60 ″ na 20 May 2019.
Morton, Barry. 2016. "Akụkọ Samuel Mutendi enweghị ike ịbụ eziokwu." Akwụkwọ akụkọ a na-ebipụtabeghị. Nweta site na https://www.academia.edu/26700853/Samuel_Mutendis_Biography_Cannot_Be_True na 20 May 2019.
Müller, Retief. 2015. "The Zion Christian Church na Global Christianity: Na-ekwu banyere a Tightrope n'etiti Localization na Ijikọ ụwa ọnụ." Religion 45: 174-90.
Müller, Retief. 2011. Okpokoro ala nke ndi Afrika: Uzo di iche iche na ndi ozo nke ndi bi na Zion of Zion. Farnham: Ashgate.
Rafapa, Lesibana, 2013. "Ọdịnaya, Ijikwa na Ọrụ nke Oral History na Zion Christian Church." Pp. 89-101 na Oral History: Heritage and Identity, nke Christina Landman deziri. Pretoria: UNISA.
Sewapa, Tebogo Molate. 2016. Nchịkọta akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị banyere mmalite nke ozi Apostolic Faith nke South Africa na ndị ọzọ dị na Pentikọstal nke dị na South Africa (Ọmụmụ ihe Zayọn na Pentikọstal). Ngalaba Ph.D, Stellenbosch University.
Sullivan, Andrew Leslie. 2013. Obere okwu, Mkpachapụta akụkọ ihe mere eme nke Zayọn Ndị Ozizi Evangelical nke Afrika n'etiti Amazioni nke Southern Africa nwere Nkọwa Pụrụ Iche na mmekọrịta ya na Chọọchị Katọlik nke Zayọn. Ihe nkuzi nke Master, Ụlọ Akwụkwọ Seminik nke South Africa.
Wouters, Jackey, 2014. Ihe omumu nke ihe omumu nke ndi ogwu di iche iche n'Afrika choro ulo akwukwo ndi nwere ntughari puru iche nye ndi nzuko Kraist Zionist na Marabastad. Usoro nkuzi nke Master, Mahadum nke South Africa.